China Graphite mudziyo Mugadziri uye Mutengesi | Jinglong
Graphite midziyo inoshandiswa mune yakanyanya-kupisa tembiricha mafekitori anonyanya graphite areka, graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist, graphite sagger, graphite humburumbira, graphite disc, graphite kusunda ndiro, uye graphite zvigadzirwa mamwe maumbirwo.
Iyo billet yekusarudza musimboti wechigadzirwa ichi ndeichi: hapana kusvibiswa kwezvinhu zvakarapwa, hupenyu hwakareba hwebasa, zvine musoro mbishi zvinhu zvemutengo. Zvinoenderana nezvinodiwa chaicho nevatengi, tinogona kugadzira kuchenesa uye oxidation kuramba kurapwa kweiyo graphite midziyo
Zvimiro: Zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana, tinokurudzira zviripo zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvakagadzirwa kuti zvigonane zvakasiyana nevatengi zvinodiwa kune zvigadzirwa, maumbirwo uye hukuru.
晶 龙 表 表 表 表
Ichi chinongova chikamu chedu graphite zvinhu paramende, kana iwe uine zvakasiyana zvinodiwa, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Pashure: Graphite giya
Zvadaro: Graphite inotenderera tsvimbo